हामी नेपाली खेलकुदको विकासमा अग्रसर छौ ः वाइवा « KhelkudNews.com
हामी नेपाली खेलकुदको विकासमा अग्रसर छौ ः वाइवा
Published On : 21 December, 2014 7:11 pm
सात महिना अघि अमेरिकामा रहेका नेपाली खेलाडीहरुले एनआरएन अमेरिकाको खेलकुद शाखा गठन गरेको थियो । अमेरिकामै रहेर नेपाली खेलकुदलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्य रहेको सो संगठनमा नेपाली खेलकुदमा स्थापीत नाम चन्द्र तामांग,थानेश्वर राइ, सुनील चौधरी, बिनोद श्रेष्ठ, राजेश कर्माचार्य, छेवांग लामा, समर बहादुर गोले र निलम केसी जस्ता ब्यक्तित्व समाबेश छन् । त्यसै संगठनमा प्रमुख तथा युनिभर्सल युनाइटेड नेप्लीज तेक्वान्दो फेडेरेसनका बोर्ड अफ डाइरेक्टर मनमोहन वाइवासंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
तपाइहरुको सस्थाको कार्यक्रम बारे बताइदिनुस न ।
हामीले त्यहा रहेका नेपालीहरुलाई संगठीत गर्ने जमर्को गरेका छौ । नेपालीका माझमा केही मैत्रीपूर्ण खेल र प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछौ । नेपाली खेलकुदलाई सहयोग गर्नका लागि भाबी कार्यक्रम पनि तय गर्दैछौ ।
नेपाली खेलकुदको समस्या के हुन् ? र तपाइहरुको सहयोग कस्तो रहने छ ?
नेपालको समस्या आर्थीक समस्या हो । हामीले विभिन्न खेलमा धेर थोर सहयोग गरेका छौ । साथमा प्रशिक्षणमा पनि समस्या छ । हामीले दक्ष जनशक्ति विकास र प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने छौ । केही समय अघि फणीन्द्र खड्का र अर्जुन भक्त राइले एउटा महत्वपूर्ण कोर्ष गर्नु भयो । यसमा हामी सकरात्मक थियौ । छौ पनि । उहाहरुको दक्षतामा भएको बृद्धीले नेपाली तेक्वान्दोमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ ।
नेप्लीज तेक्वान्दो फेडेरेसनमा आबद्ध ब्यक्तित्वको बारे बताइदिनुस न ।
हामी नेपालमा रहदा तेक्वान्दोमा रहेका ब्यक्ति विभिन्न देशमा छरिएका छौ । यसरी छरिएर पनि संगठीत हुदा तेक्वान्दो विकासमा केही सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो । हामी नौ जनाको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा म सहित विपिन श्रेष्ठ, दिवाकर डान मर्हजन, सन्तोष प्रधान, लब गोर्खाली, कुमार कार्की, राज कुमार राइ र सरोज गुरुंग रहेका छौ । हामी सबै नेपाली तेक्वान्दाका बारे जानकार भएको र नेपाली तेक्वान्दोको विकास चाहने भएका कारण सफल हुन छौ भन्ने बिश्वास छ ।
तपाइहरुको भुमिका के मा केन्द्रित रहेको छ ?
हामी नेपालमा तेक्वान्दो एकेडेमी स्थापना गर्न केन्द्रित छौ । यसका लागि १ करो १९ लाख रुपिया आबस्यक छ । हामी त्यो जुटाउन लागी परेका छौ । हामीले संघ र सिनीयर प्रशिक्षक संग कुराराखेका छौ । उहाहरु सकरात्मक हुनु हुन्छ । मलाइ लाग्छ यसले राम्रो फड्को मार्छ ।
नेपाली तेक्वान्दोको स्तर विगतको भन्दा गीरेको छ । के लाग्छ अब यो उकासीन्छ ?
प्रशिक्षणको समय अभाव र अन्य समस्याले यस्तो भएको हो । हाम्रो चाहना नेपाली खेलाडीलाई अमेरिकामा नै पनि बोलाएर स्तरीय प्रशिक्षण दिने हो । लामो समयको प्रशिक्षण र स्तरीय बैदेशीक प्रशिक्षणले फेरी हामी पुरानै लयमा फर्कन सक्ने कुरामा आशाबादी छौ । यसका लागि आबस्यक सहयोग गर्न हामी पनि तयार छौ ।